Iprojekthi yeHogarth Shakespeare. Ababhali abaGubungela imisebenzi kaShakespeare | Uncwadi lwangoku
Iprojekthi yeHogarth Shakespeare. Ababhali abakhulu abagubungela imisebenzi kaShakespeare
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama, Ezahlukeneyo
El Iprojekthi yeHogarth Shakespeare kuqalwe ngenjongo Phinda ubhale uncwadi lukaShakespeare kuluntu lwenkulungwane ye-XXI. Yayiyinxalenye yemibhiyozo ye- Isikhumbuzo seminyaka engama-400 yokusweleka kwakhe ngo-2016. Abo banoxanduva benkqonkqoza kwiminyango ka ababhali abaziwayo ukwenza isindululo sokuthatha inxaxheba uphononongo kweyona misebenzi yakhe ibalulekileyo.
Iziphumo zaqala ukubonwa ukusuka kwi-2015 kwaye ziya kuhlala zide zibe yi-2021. Abo babhali babenjalo UMargaret Atwood (Uqhwithela), UWoward Jacobson (Umrhwebi waseVenice), U-Anne tyler (Ukuthanjiswa kweShrew), UTracy chevalier (Othello), UJeanette winterson (Ibali lasebusika), UGillian Flynn (Hamlet) Y U-Edward St. Aubyn (UKumkani ophambili) kunye Jo Nesbø (Macbeth). Oku kujonga kwinto esele ifundeka kwaye ingekapapashwa.
1 Cinezela uHogarth
2.1 UJeanette winterson
2.2 UMargaret Atwood
2.3 U-Anne tyler
3 Seza kuza
3.1 UTracy chevalier
3.3 UHarry Jacobson, uEdward St. Aubyn noGillian Flynn
UVirginia Wolf kunye nomyeni wakhe uLeonard baseka indlu yokupapasha Cinezela uHogarth en 1917 kwigumbi lokuhlala apho baphrinta khona. Indlu ibikhona Indlu kaHogarth kwaye yayiseRichmond, Londres. Imisebenzi yokuqala yayingumbhali wakhe, kodwa ishishini lakhula kwaye baqala ukupapasha imisebenzi kwisangqa sezifundiswa ze Bloomsbury, ababeyinxalenye yazo.
UWinterson usungule eli nyathelo kunye Umsantsa wexesha, yeyiphi ingxelo ayenzayo Ibali lasebusika. Iklasikhi kaShakespeare ibalisa ibali lika I-Leontes, Kumkani waseSicily, owala umfazi wakhe Hermione imfanyekiswe ngu nomona. Ngaye, uLeontes uya kuphulukana nentombi yakhe Ilahlekile, omkhanyelayo, kunye nomhlobo wakhe osenyongweni, Iipolyxenes, Kumkani waseBohemia. Izigqibo zakho ziya kukwenza ukuba uchithe ezinye iintsuku zakho uzitya nokuzisola.
Yiyo loo nto uWinterson akha inoveli ngokudibanisa amabali amancinci ahlukeneyo Abalinganiswa babenza babe nobugqwetha ngakumbi, kodwa benomnqweno ofanayo wobuntu wokubhala kwakhona elidlulileyo ukulungisa iimpazamo.
Umbhali owaziwayo, unemfashini ngoku, ubuyisela kwakhona Uqhwithela en Imbewu yegqwirha, inoveli ethetha nge amandla amagama. UAtwood uphakamisa ibali le UFeliks Fletcher, oneminyaka engamashumi amahlanu ubudala onikezela ngexesha lakhe elilelakhe uququzelele imidlalo yeqonga entolongweni.
Umbhali uFeliksi ukhetha uhlala uShakespeare kwaye kulo nyaka uphakamisa Uqhwithela. Ngamagama endalo iphela yomsebenzi othetha nge ukuziphindezela Amabanjwa kaFletcher enza ukuba ibe yeyobuqu kakhulu. Kodwa uFeliksi uya kuba nakho ukuziphindezela nakubani na omonakalisileyo ngaphambili ngomhla wokuvula womdlalo.
Umbhali unika umbono wakhe Ukuthanjiswa kweShrew kule Iviniga intliziyo. Kwangelo xesha, kuthatha ithuba lokujongana neengxaki ezimbini zangoku: imeko yomfuduki nokukhululwa kwabafazi.
Umlinganiswa ophambili ngu UKate battista, umfazi ngokucacileyo uqinisekile ngaye, kodwa ngubani ongaqinisekanga kangako. Kutheni le nto usapho lwe-eccentric ekufuneka eluhoyile, ene Isazinzulu utata kunye udade okwishumi elivisayo kwaye whimsical. Ukongeza, enkulisa apho asebenza khona izinto azihambi kakuhle. Abantwana bayamthanda, kodwa abazali bakhe abakuxabisi ukunyaniseka kukaKate kwezakhe izimvo.
Kodwa ngenye imini iyavela UPioter Cherbakov, umphandi onceda utata wakhe kwilebhu yakhe. Yi umphambukeli kwaye iphepha-mvume lakho lokuhlala sele lizakuphelelwa kwaye uyakugxothwa kwilizwe ngaphandle kokuba awunasizathu sosapho sokuhlala Kodwa uGqirha Battista ufumene isisombululo esingavumelaniyo noKate.
Ngomhla wopapasho wale nyanga, i-Chevalier iveza ingxelo ye Othello en Inkwenkwe entsha. Isihloko sibhekisa kuso Osei Kokote, unyana wozakuzaku osuka Ghana, oqala unyaka wesithandathu esikolweni. Singaphakathi Washington kwiminyaka ye-70s kunye no-Osei, ukongeza kwimizamo yokudibanisa kunye nokufumana abahlobo, ngu ngokwahlukileyo inkwenkwe emnyama esikolweni. Yenza ubuhlobo kunye dee, eyona ntombazana ithandwayo, kodwa Ian, omnye wabahlobo bakhe, ugqiba kwelokuba abuqhawule obo buhlobo.
Ukupapashwa kwayo eSpain kulungiselelwe eyokuqala Aprili. Umbhali waseNorway wenza inguqulelo kumgca wakhe omnyama kakhulu we Macbeth, que iseti kwisixeko seshishini esinemvula nakwii-70s. ophambili umhloli wamapolisa, UMacbeth, oyena ulungileyo kunye noxabisekileyo ngoontanga bakhe, kodwa uninzi amabhongo, urhwaphilizo kunye neparanoid, uneengxaki zotywala neziyobisi.
Ukuya kuyo Ukulwa kwamandla noogxa bakhe, abaphathi kunye nabahlobo abathembekileyo uyadibana kumlo wakhe nxamnye ubuqhetseba beenkosi zeziyobisi dibanisa nezo ze bezopolitiko utshintsho. Kwaye ukuba oko akwanelanga, kukho ubudlelwane kunye neLady Macbeth, isithandwa sakhe, ngubani umnini wekhasino.
UHarry Jacobson, U-Edward St. Aubyn y UGillian Flynn
I-Shylock ligama lam Ngaba yinguqulelo yalo mbhali Umrhwebi waseVenice, engekathunyelwa apha. Kwaye basalindile I-Dunbar, UKumkani ophambili iphindiwe nguEdwart St. Aubyn, kunye Hamlet de UGillian Flynn, ekucwangciselwe yona 2021.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iprojekthi yeHogarth Shakespeare. Ababhali abakhulu abagubungela imisebenzi kaShakespeare
Itheko Iincwadi ezi-7 phakathi kwesinxibo, amaqela, uthando nolwaphulo-mthetho